Cimilada sii kululaaneysa ayaa u horseedi doonta dadka Mareykanka inay jimicsi badan sameeyaan. Saadaasha Shabakadda
Cimilada sii kululaaneysa ayaa u horseedi doonta dadka Mareykanka inay jimicsi badan sameeyaan
Markii ay kuu sheegaan in celceliska heer kulka adduunka uu sii kordhayo iyo in roobabku ay ka yaraanayaan meelo badan oo adduunka ah, way kuu fududaanaysaa inaad ka fikirto inuusan wax faa iido ah u lahayn aadanaha. Laakiin haa, way dhacdaa.
Sida lagu sheegay daraasad uu sameeyay Nick Obradovich laguna daabacay joornaalka 'Dabeecadda Aadanaha ee Dabeecadda', kululaynta adduunka ayaa u horseedi doonta dadka Mareykanka inay jimicsi badan sameeyaan.
Maaddaama jiilaalku qabowgu yaraado, dadku waxay u muuqdaan inay doonayaan inay dibadda u baxaan oo jimicsi badan sameeyaan. Dhamaadka qarniga, kuwa ku nool magaalooyinka sida North Dakota, Minnesota, iyo Maine aad ayey uga faa'iideysan karaan. Sida laga soo xigtay waxbarashada, waxay kordhin karaan dhaqdhaqaaqa jirkooda ilaa 2,5%.
Laakiin nasiib daro kuwa ku nool koonfurta, gaar ahaan agagaarka lamadegaanka, waxay u badan tahay inay waqti badan ku qaataan guriga maxaa yeelay heerkulka banaanka ayaa loo adkaysan karin. Arizona, koonfurta Nevada iyo koonfur bari California waxay la kulmi karaan hoos u dhacii ugu weynaa ee dhaqdhaqaaqa dhamaadka qarniga.
Si loo gaaro gabagabadan, Obradovich wuxuu falanqeeyay sahanno dowladeed oo laxiriira caadooyinka dhaqdhaqaaqa, macluumaadka cimilada maalin kasta laga soo bilaabo markii wareysiyada la qaaday, iyo tusaalayaasha xaaladaha cimilada mustaqbalka. Sidaa darteed, wuu gartay taas Marka heerkulbeeggu akhriyo 28 darajo Celsius ama ka sareeya, dadka guud ahaan waxay leeyihiin rabitaan ka yar inay baxaan.
Weli, in kasta oo ay tani waxtar yar u tahay magaalooyinka qaarkood, xaqiiqadu waxay tahay in diirimaadka adduunka uu ka khatar badan yahay faa iidada, sida uu yiri Dr. Howard Frumkin, oo ah borofisar ku takhasusay caafimaadka deegaanka ee Jaamacadda Washington. Imaanshaha cayayaanka kuleylaha ah ee aagagga dhexdhexaadka ah waxay halis gelin kartaa nolosha dad badan, ma ahan oo keliya Ameerika, laakiin dhammaan qeybaha meeraha ee leh cimilo dhexdhexaad ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Cimilada sii kululaaneysa ayaa u horseedi doonta dadka Mareykanka inay jimicsi badan sameeyaan
Qalabka saadaasha hawada iyo shaqadooda
Maxay yihiin meelaha ugu duufaanta badan adduunka?